တကယ်ပဲကြီးကျယ်တဲ့ပို့စ်တစ်ခု။ ကုန်ပစ္စည်းအတွက် UI တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာကို infographic ကြိုက်တယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ Dougie! အလွန်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်🙂
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်အခြေခံ, ဒါပေမယ့်တကယ်အရေးကြီးသောအင်ဖိုအတွက်။ အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုကတော့သင်၏ခေါင်းကြီးပိုင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေရန်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပစ်မှတ်ထားသည့်စျေးကွက်သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သူတို့၏နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆွဲဆောင်မှုဖြင့်ဖြေရှင်းပါ။
ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်ချက် Annie နဲ့ကျွန်မလုံးဝသဘောတူ! စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့နှိပ်ခြင်းသည်သင်၏စာဖတ်သူကိုလှုံ့ဆော်ရန်အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။